Kedu ihe m ga-achọ ịma banyere saịtị m maka nyochacha njirimara m na-achọ ka m nwee ọganihu?
Ùnu echeela ihe SEO pụtara? N'ezie, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịgụ nkọwa zuru ezu nke okwu a na Google. Otú ọ dị, SEO pụtara ihe dị iche nye ndị dị iche iche. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nwe ụlọ ebe a ghọtara okwu nke njikarịcha nchọgharị dịka ijikwa mmekọrịta na engines ọchụchọ site na ịntanetị mgbasa ozi na ngwanrọ nyocha, ndị ọzọ na-ewere SEO dị ka ihe kachasị mma ihe e kere eke ma jikọta ụlọ.
N'ikwu eziokwu, iji ghọta SEO kachasị mkpa, ịkwesịrị ịnweta ahụmahụ na mpaghara a. Nyocha njirimara ọchụchọ bụ njikọta nke mma na ọdịnaya pụrụ iche, ntọala ndị ọkachamara (nchịkọta weebụ na ime ụlọ), ahụmahụ zuru okè nke nwere ngalaba na ikike na Google. Enwere ihe karịrị 200 ụkpụrụ Google ịkwesịrị ịgbaso mgbe ị na-emewanye ebe ị na-ahụ anya. Site n'ịtụle ihe ndị a niile na usoro nke ịmepụta mgbasa ozi ịntanetị, ị ga-enwe ike ịdọta okporo ụzọ ezubere iche site na engines ọchụchọ wee banye na TOP nke nsonaazụ ọchụchọ.
Ka anyị tụlee ihe ị ga-achọ ịtụle banyere saịtị gị maka nyochacha njikwa search iji nwee ọganihu.
Ihe dị mkpa ị chọrọ iji tụlee maka SEO kacha mma
Imirikiti webmasters na-elekwasị anya mgbalị ha na nchọpụta isiokwu na ebe nhazi ha ziri ezi na ibe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nọ na-arụ ọrụ na njirimara kachasị na ntinye okwu gị ma ka enweghị nsonaazụ anya, ị kwesịrị ị na-atụle ihe ndị ọzọ na-emetụta SEO rankings.
Google algorithm abụghị nanị ọnụego gị dị mkpa na nhazi njirimara kama nyochaa ozi dịka ndị ọrụ oge ha na-emefu saịtị gị, ọnụọgụ nke ibe ha na-ele anya, ọnụọgụ ọnụ, akwụkwọ ndị na-adịghị adị, njikọ ndị na-agbawa na ya.
Nanị ụzọ isi zụlite ọnụego ntọghata na ịnweta ndị ọrụ ịnọ na saịtị gị bụ iji melite ahụmịhe ha na saịtị gị. Dị ka ahụmahụ nke onye ọrụ bụ ihe dị mkpa Google ranking, ọ dị gị mkpa ilekwasị anya oge dị mkpa nke oge gị na mgbalị iji mee ka saịtị gị dị mfe ịnyagharịa ma bụrụ ihe dị mkpa maka ụfọdụ ajụjụ.
Iji melite ọrụ ndị ọkachamara ma mee ka saịtị gị SEO-enyi na enyi, tụlee usoro njikarịcha njirimara nke saịtị.
Nhazi mmeghachi omume
Ibe weebụ gị kwesịrị imeghachi omume iji zaa nke ọma na ngwaọrụ nke onye ọrụ. Mgbe mmelite Google na-adịbeghị anya, nzaghachi weebụsaịtị na-aghọ usoro nke SEO nke jikọtara ya na azụmahịa nke azụmahịa. Ịkwesịrị ịnye atụmatụ kachasị mma nke saịtị na ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba ụrọ nwere ike gosipụtara dị ka nsụgharị desktọọpụ nke ibe weebụ.
Site na ịmepụta mmepụta ihe, ị na-enweta ohere iji dozie ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị ahịa gị nwere ike ịchọta dị ka ihe kachasị achọ site na ngwaọrụ mkpanaaka. Ọ bụrụ na ị na-ewu ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ, ọ dị mkpa ka ị na-anabata iji melite ọkwa ma na-adọta ndị ọbịa. Ọ bụrụ na ibe weebụ gị ugbu a anaghị anabata, ịnwere ike iweghachite ma ọ bụ wụnye ngwa mgbakwunye mobile-friendly.
Ịkwesịrị ime ka saịtị gị gụnyere ndị ọrụ niile. Ịnweta ebe nrụọrụ weebụ chọrọ ihe kachasị mma ALT na ihe oyiyi niile. Ọ ga - enyere gị aka ịgwa ndị ọrụ niile gbasara ọdịnaya gị ma mee ka ha soro saịtị gị. Ọzọkwa, ịnweta bụ ihe niile gbasara iji ihe nkwụnye nkụzi dịka H1 dịka H1 maka isi na-eduzi nkụnye eji isi mee na H2 maka ndị isi. Mkpado ndị a na-enyere aka ịmepụta ihe dị n'ime ya ma mee ka ọ dị mfe nsị maka bọtịnụ ọchụchọ na ndị na-agụ ya.
Ụdị njirimara dị otú a dị ka achịcha na-enyere ndị ọrụ nkwarụ aka ma nyere ha aka ịghọta ebe ha nọ na saịtị gị. Ọzọkwa, a na-emepụta ntọala saịtị na-enyere ndị ọrụ niile na search engines aka ịchọta echiche zuru ezu na saịtị gị Source .